UChristopher Columbus 'Uhambo lwesine nelokugqibela lokuhamba kwehlabathi
Imbali kunye neNkcubeko Imbali yaseLatin yaseMelika
Uhambo lwesine nolokugqibela lweHlabathi likaChristopher Columbus
by Christopher Minster
UColumbus Ufumana Uncedo Ngonyaka Xa Ucinga Ngehambo Lokugqibela
NgoMeyi 11, ngo-1502, uChristopher Columbus wasesetyenziselweni sesine kunye nohambo lokugqibela kwihlabathi elitsha. Wayeneminqanawa emine, kwaye wayezimisele ukuhlola iingingqi ezingenasiphelo ukuya entshonalanga yeCaribbean, ngethemba lokuba kufumana inqanawa entshona kwi-East. UColumbus wahlolisisa iindawo ezisemantla yaseMntla eMerika, kodwa iinqanawa zakhe, ezonakaliswe ngqhwithi kunye neziqhamo, zawa phantsi xa ehlola. UColumbus kunye namadoda akhe baxakeke kwiJamaica malunga nonyaka ngaphambi kokusindiswa.
Babuyela eSpain ngasekupheleni kuka-1504.
Kuninzi okwenzekile ukususela ngohambo luka-1492 lukaColumbus lokufumanisa . Emva kohambo olumlando, uColumbus wabuyiswa kwiNtsha elitsha ukuseka ikholoni. Nangona uColumbus wayengumkhumbi onobuchule, wayengumlawuli oyingozi, kunye nekoloni eyayisungula e-Hispaniola yamchasa. Emva kohambo lwakhe lwesithathu , wabanjwa waza wabuyela eSpain ngamaketanga. Nangona wakhutshwa ngokukhawuleza kukumkani kunye nenkosikazi, udumo lwakhe lwadutshulwa. Sekunjalo, isithsaba esivumelwaneni sokuxhaswa olunye uhambo lokugqibela lokufumanisa.
Ngokuxhaswa kobukhosi, uColumbus wafumana iinqanawa ezine eziselwandle: iCapitana, iGalgaga, iVizcaína neSantiago de Palos. Abazalwana bakhe uGeorge noBartholomew kunye nendodana yakhe uFernando basayinela, njengabanye ababalindi beehambo zakhe zangaphambili. UColumbus ngokwakhe wayeneminyaka engama-51 kwaye wayeseqala ukubizwa ngeenxa zonke enkundleni. Wayekholelwa ukuba xa amaSpeyin ebumbene ihlabathi phantsi kobuKristu (apho bayeza kukwenza ngokukhawuleza ngegolide kunye nobutyebi behlabathi elitsha) ukuba ihlabathi liya kugqiba.
Kwakhona wayejonge ukugqoka njengesiqhwala esingaqhelekanga, kungekhona njengomntu ocebileyo.
UColumbus wayengamkelekanga kwisiqithi sase-Hispaniola, apho abaninzi abantu abahlala khona bekhumbula ukuphathwa kwakhe kanobukhohlakali kunye nokungasebenzi. Nangona kunjalo, waya apho emva kokuqala ukuya eMartinique nasePuerto Rico.
Wayenethemba lokutshintshiselana enye yeenqanawa zakhe (iSantiago de Palos) ngokukhawuleza. Ngesikhathi elindele impendulo, wathumela igama lokuba isiphepho sondela kwaye i-rhuluneli entsha (uNicolás de Ovando) kufuneka ilibazise i-fleet eya eSpeyin.
U-Ovando wanyanzeliswa uColumbus ukuba anqamle iinqanawa zakhe kwiindawo ezisemaphandleni kunye neengcebiso zakhe, uthumele iinqanawa ezingama-28 eSpeyin. Iqhwithi elininzi lagubha iingu-24 kubo: abathathu babuya kwaye beyodwa-ngokungaqhelekanga, leyo leyo eneququzelelo likaColumbus enqwenela ukuyithumela eSpain-yafika ngokukhuselekileyo. Kwiimikhilomitha ezimbalwa kude, iinqanawa zaseColumbus zahlulwa kakubi, kodwa zonke zahlala zihamba.
Kuyo yonke iCaribbean
Xa isiqhwithi sidlulile, iinqwelo ezincinane zaseColumbus zazimisela ukukhangela inqanawa entshonalanga. Iziphepho zaqhubeka, kwaye uhambo lwabafileyo. Iinqanawa, sele zonakaliswe kwiqhwithi, zathatha kakubi. Ekugqibeleni, bafika eMntla Merika, banqumla unxweme lwaseHonduras kwisiqithi abantu abaninzi bakholelwa ukuba yiGuanaja. Apho balungisa iinqanawa baza bathabatha izinto.
Ngethuba lihlolisisa iPentral America, uColumbus wadibana nabaninzi bakholelwa ekubeni ngowokuqala kunye neyona ndawo enkulu yelizwe. Iinqwelo zeColumbus zafumana inqanawa yokurhweba, inqanawa ende, ebanzi egcwele impahla kunye nabahwebi bakholelwa ukuba nguMeya waseYucatan.
Abahwebi babethwala izixhobo zobhedu kunye nezixhobo, iinkemba ezenziwe ngamatye kunye neentyantyambo, iingubo, kunye nesiphuzo esithile esinjengobhiya esenziwe ngqolowa. UColumbus, ngokungaqhelekanga, wagqiba ekubeni angaphengi le mpucuko yentengiso: kunokuba ajika enyakatho xa ehlasela iPentral America, waya ngasezantsi.
Central America ukuya eJamaica
UColumbus waqhubeka ehlola ukuya ngasemzantsi kunye neNicaragua yanamhlanje, eCosta Rica nasePanama. Wadibana namasiko amaninzi asekuhlaleni, ebona ummbila utshalwa emasimini. Kwakhona babone izakhiwo zamatye. Bathengisa ukutya kunye negolide xa kunokwenzeka. Ekuqaleni kuka-1503, iinqanawa zaqala ukuhluleka. Ukongeza kwinto yokubetha ababeyithathile kwiqhwithi enye kunye neziphepho ezininzi, kwafumanisa ukuba babephethwe ngama-termite. UColumbus wahamba ngokukrakra waya eSanto Domingo kwaye uncedisa, kodwa iinqanawa zakhe zenza kuphela ukuya eSanta Gloria (eSt.
U-Ann's Bay), eJamaica.
Iinqanawa zazingenakuqhubeka. UColumbus namadoda akhe benza okusemandleni abo, baqhekeza iinqanawa ukuba zenze iindawo zokuhlalisa kunye neziseko. Benza uxolo kunye nabantu basekuhlaleni, abazondla ukutya. UColumbus wakwazi ukufumana igama kwi-Ovando yenkxalabo yakhe, kodwa u-Ovando wayenayo imithombo okanye umnqweno wokumnceda. UColumbus kunye namadoda akhe baxhalabile kwiJamaica iminyaka, besinda kwiintsholongwane, i-mutinies, kunye noxolo olungapheliyo nabemi. UColumbus, ngoncedo lenye yeencwadi zakhe, wachukumisa abahlali ngokucacisa ngokuchanekileyo ukucima . Ekugqibeleni, ngoJuni 1504, iinqanawa ezimbini zafika ukuza kuzifumana.
Kubaluleka kohambo lwesine
UColumbus wabuyela eSpeyin ukuba afunde ukuba uKumkanikazi wakhe othandekayo u-Isabel wayefa. Ngaphandle kwenkxaso yakhe, uColumbus akaze abuyele kwihlabathi elitsha. Wayeqhubeka kwiminyaka kunoma yintoni na, kwaye kuyamangalisa ukuba wasinda kwindwendwe yesine eyingozi. Wafa ngo-1506.
Uhambo lwe-Columbus 'Owesine luphawuleka ngokukodwa ekuhloliseni olutsha, ngokubanzi ecaleni konxweme lwaseMntla Merika. Kwakhona kunomdla kwiimbali-mlando, ezixabisa iinkcazo zemveli zenkcubeko ezihlangene neenqwelo ezincinci zeColumbus, ngokukodwa ezo candelo malunga nabahwebi baseMeya.
Abanye balabo babesendleleni yohambo lwesine babeya phambili ukuya kwizinto ezinkulu, ezifana noAntonio de Alaminos, inkwenkwe yenkwenkwezi eya kuthi kamva iqhube ukuqhubela phambili iphinde ihlole ubuninzi beCaribbean entshona. Indodana kaColumbus uFernando yayiza kubhala kamva ubaba wakhe owaziwayo.
Uhambo lwesine lwaluyimpumelelo malunga naluphi na umgangatho. Abaninzi babantu bakaColumbus bafa, iinqanawa zalahleka, kwaye akukho nxalenye eya ngasentshona yafunyanwa. UColumbus akayi kuphinda ahambe ngomkhumbi. Wafa waqiniseka ukuba ufumene iAsia, nangona ininzi yaseYurophu sele isamkele ukuba iAmerica ayengaziwa "Ihlabathi elitsha." Sekunjalo, uhambo lwesine lubonise ngcono kunanoma yiyiphi enye iColumbus, izakhono, kunye nokuqina, iimpawu eyamvumela ukuba athole amaMerika kwindawo yokuqala.
Umthombo: UTomas, uHugh. Imifula yeGolide: Ukuphakama kobukhosi baseSpain, ukusuka eColumbus ukuya eMagellan. ENew York: House Random, 2005.
I-Popol Vuh - iBhayibhile yesiMaya
I-Biography yePascual Orozco
Biography yeLope de Aguirre
Emiliano Zapata kunye neSicwangciso seAyala
Imbali yaseLatin yaseMelika: IiMfazwe zoLuntu kunye neZigqibo
Uhambo lwe sibini lukaChristopher Columbus
Ukubuyiselwa kweNdlovukazi ka-Queen Anne: I-Blackbeard yeMighty Pirate Ship
Biography kaSimon Bolivar
Iingxelo Ezilishumi ngo-El Dorado
Ukuya kwiKholeji Xa Uhlala Ekhaya?
I-Escherian Stairwell: Inene okanye Inkohliso?
IiRekhodi zehlabathi zeMitha ezili-10 000
Iimifanekiso ze-Top 10 Essential Dwight Yoakam
Yintoni iMithetho kaMtshukumo kaNewton?
I-Faire lesine cents iyabetha
Indlela yokuvavanya i-Car Stereo Amplifier
IJografi yaseChongqing, eChina
UBoston Umtshato: Abafazi abahlala ndawonye, ​​19th / 20th Century Style
Uhluko phakathi kweengelosi kunye nezikhokelo zomoya
Izizathu ezilungileyo ezi-5 Wonke umntu kufuneka azibukele imifanekiso
Iinkcukacha ezibalulekileyo malunga neDelaware Colony
UJohn Adams: Iinkcukacha ezibalulekileyo kunye ne-Biography efutshane
Iimpawu eziMnandi kunye neZityhilelo ezivela 'Ubugcisa beMpiya buvusa'
Xa kufuneka umntwana aqale i-Gymnastics?
Indlela Eyesibhozo: IQiniso EliQine Elixabisekileyo eBuddhism
Ukufunda i-Quiz ethi "Usindiso" yiLangston Hughes
Iikhowudi ze-HTML - iMpawu zeMathematika
Ziziphi i-PGA Tour Slow Play Imithetho neMigwebo?
Yintoni enokuyenza nge-ATV enezantsi
I Krismesi Yeka Ukubala i-Dot kumaDots
Iimpawu ze-10 eziphezulu ze-1981
Ukuxubusha isenzi saseFrentshi 'Buyter' ('Ukuthenga')
Isikhokelo soMfundi wokuPhila kwiiKholeji zeKholeji
I-Cygnus X-1: Ukuxazulula i-Stellar Mystery